Faaiidooyinka caafimaad ee Kamsarta - Caafimaad tips
Home / Cuntada / Dhirta / Faaiidooyinka caafimaad ee Kamsarta
Faaiidooyinka caafimaad ee Kamsarta
Admin December 03, 2018 Cuntada, Dhirta
Faaiidooyinka caafimaad ee kamsara kabsarta caleenta
Kamsaradu ama kabsarta waa geed caan ah midabkeedu waa cagaar iftiimaaya, si kastaba ha ahaatee kamsartu waxay hoosta iyo xididka ku yeelan kartaa midab cadaan ah, dhadhan ahaana waxay leedahay xoogaa yar oo macaan iyo dhanaan ah sidoo kale waxay leedahay maadooyin badan oo caafimaad , hadaba soomaalidu waxay u adeegsadaan inay ku darsadaan kuna carfiyaan cuntada sida suugada, maraqa hilibka bariiska iwm.
Caaqabuqyada : Kabsarta waxay la dagaalantaa xanuunada caabuqyadu keenaan markasta oo xanuunku kugu sii dabo dheeraado wuxuu jidhka aadanaha u gaystaa inuu kala dagaalamo bogsasho iyo caafimaadka qabka guud sidaas darteed Alle weyne swt ayaa kabsarta ku abuuray maadooyin la dagaalama caabuqyada iyo sumaha jidhka dhaawici kara.
Dheefshiidka : Waxay kaloo kamsaradani u wanaagsan tahay dheefshiidka sidaas darteed waa caleen dabiici ah oo ay ku badan yihiin maadooyin taageeraya shaqada iyo caafimaadka dheefshiidka
Miisaan dhimis : Dhinaca kale kabsaradu waxay kor u qaadaa jaaniska uu qofku miisaankiisa ku dhimi karo maxaa yeelay waxaa ku yar waxa loo yaqaano kalariga,hadaba qofkasta oo jecel inuu miisaankiisa si caafimaad leh u dhimo waxaa lagula taliyaa inuu cuntada ku darsado iskuna cuno kabsar iyo salad ama ansalaato.
Akhriso cayaaraha lagu caatoobo
Dufanka : Kabsar caleentu waxay kaloo hoos u dhigtaa kalastaroolka noociisa halista ah, maxaa yeelay faaiidooyinkeeda ugu muhiimsan waxaa ka mida inay hoos u dhigto kalastaroolka midka xun ee halista ah.
Akhriso sida baruurta caloosha loo jaro
Caafimaadka beerka : Caleenta kamsarada waxaa faaiidooyinkeed kale ee cajiibka ah ka mida waxay ilaalisaa caafimaadka beerka sababtoo ah waxay qofka ka caawisaa inay hoos u dhigto subaga beerka ku samaysmi kara .
Difaaca jidhka : Caleentan kabsartu waxay kaloo waligeedba qani ku ahayd vitamiino badan gaar ahaan vitamin c, sidaas darteed kabsartu waxay xoojisaa difaaca jidhka si uu isaga difaaco bakteeriyo , infakshan iyo fayrasyada.
Dhiig karka : Geesta kale kamsartu waxay nidaamisaa heerka dhiig karka ee qof, maxaa yeelay kamsaradu waxay u roon tahay qofkasta oo qaba dhiig karka sida ay sheegeen warbixino caafimaad .
Hurdo la'aanta : Daawada ma ka cabanaysaa hurdo la'aan hadii jawaabtaadu haa ay tahay ogow hadaba in kamsaradu ay daawayso hurdo la'aanta sidaas darteed hadaad dhibaato ku qabto hurdo seexashada ama aad dareemayso xanuun iyo khalkhal kaa haysta inaad hurdo caafimaad leh seexato , waa inad ku dadaashaa inaad cuntada ku darsato caleenta kabsarta ama inaad samaysato cabitaan iyo juuska kamsarta.
Kansarka : Dhinaca kale waxay la dagaalan kamsaradu cudurka kansarka, sababtoo ah waxaa daraasado la sameeyey ka dib lagu xaqiijiyay inay kamsartu la dagaalanto kana hortagto noocyada kala duwan ee cudurka kansarka gaar ahaan kansarka naasaha ku dhaca.
Maqaarka : Kamsaradu waxay kaloo u fiican tahay isla markaana awood buuxda oo la hubo u leedahay inay wanaajiso caafimaadka maqaarka sababtoo ah cabitaanka juuska kamsarada waxaa loo isticmaalaa in maqaarka iyo jidhka qofka uu ka dhigo qof da'yar walow qofkaasi haba waynaadee.
Caleenta kamsartu waxay kaloo yaraysaa xanuunada ku dhaca laabatooyinka iyo kala goysyada roomatiisamka iyo riixa , garba xanuunka, durayga, ugu dambeyntii kamsartu waxay u fiican tahay caafimaadka wadnaha.